Xaafadaha hodanka ah oo macallimiinta dugsiyadu ku yar yihiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Erik G Svensson/Scanpix.
Xaafadaha hodanka ah oo macallimiinta dugsiyadu ku yar yihiin
La daabacay måndag 19 augusti 2013 kl 09.23
Daraasad uu soo saaray wargeyska Sydsvenska Dagbladet waxaa lagu muujiyey in xaafadiba xaafadda ay ka hodansan tahay, kaga yar tahay tirada macallimiinta dugsiyada marka la barbardhigo xaafadaha saboolka ah. Macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada tobanka degmo oo dalka ugu qanisan waxay tiradoodu ka hooseysaa celeceliska tirada dalka oo idil. Taasna waxaa laga dareemayaa in markii degmo hodan noqotaba ay wax iska dhimaan tirada macallimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
Degmada Danderyd oo dhanka waqooyi-bari kaga toosan Stockholm ayaa noqoneysa ugu macallimiin yard alka oo dhan. 15kii ardayba waxaa ku soo aada hal macallin, halka uu celceliska dalku yahay 12kii ardayba hal macallin. Degmadaas Danderyd oo isla markaasna ah degmada ugu qanisan Iswiidhen, marka laga eego waxa lagu saleeyo canshuurta bulshada laga qaado.
Waxaa kaloo la ogaadey in degmooyinka xisbiga Mooderaatka ka taliyo ay ka macallimiin yar yihiin degmooyin xisbiyada ka taliyaan. Degmooyinka ugu macallimiinta badan ayaa noqonayaan tuulooyinka Norrland, waa gobolada waqooyiga Iswiidhen.
Anders Almgren oo hoggaamiye kuxigeen ka ah Ururweynaha macallimiinta ayaa xaaladdaan ku sifeeyey:
– Waa tirakoob xiiso badan. Waxaa halkaa ka muuqata in degmooyonka qaniga ahi aysan sida degmooyinka saboolka ah maalgelin ugu samayn dugsiyada in kastoo ay lacag haystaan, iyo in degmooyinkaasi ay lacagta ku kharashgareyn wixii loogu talagalay.
Dhanka kale guddoomiyaha guddiga degmada Danderyd u arrimaha dhallaanka iyo waxbarashada Patrik Nimmerstam oo ka tirsan xisbiga Dhexe (C) ayaa ku nuuxnuuxsaday in ardayda dugsiyada hoose ee degmada Danderyd ay yihiin ardayda waxbarashada dalka ka gaarta natiijada ugu wanaagsan, in kastoo ay degmadu tahay tan ugu macallimiinta yar tiro ahaan.
– Waxaan culeyska saarnaa natiijada ardaydu ay waxbarashada ka gaaraan. Marka su’aasha la is weyddiin karaa waxay tahay loogu baahan yahay maalgelin dheeraad ah maadaama aan waxbarashada ka gaarno natiijada dalka ugu sarreysa, ayuu yiri Patrik Nimmerstam, guddoomiyaha guddiga arrimaha dhallaanka iyo waxbarashada ee degmada Danderyd.